Amacici e-Hoop yamadoda-Ifashoni kumadoda aneSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Amacici amadoda asekhona Owona mqondiso wamakhwenkwe avukelayo, enobuntu kunye nesimilo. La macici sele ehamba iminyaka emininzi kwaye ngoku ngumzekelo obalaseleyo wokubonisa ukuba awuphelanga mandla. Ngakumbi nangakumbi ubukrelekrele busetyenziselwa ukuza nehupula zoyilo olukhulu kunye nezinto ezininzi ezikhoyo.
Zininzi iimodeli ezenzelwe umntu kwaye uninzi lwazo sele lwenziwe ngentsimbi edumileyo engenazingcingo. Lo mbandela, kuba uqoqosho, kunjalo Kulula ukuthengisa kwaye unikeze ukumelana okukhulu. Sinamacici abo bonke ubukhulu, ukuvalwa kwe-snap, kunye neminqamlezo kunye nezinto zokuhombisa ezinje ngamatye e-zirconia, apha eHombre con Estilo sikubonisa ukuba yeyiphi eyona ifashoni.
1 Imbali yemisesane emntwini
2 Ihupu zamadoda
2.1 Isinyithi enemibala yesilivere
2.2 Yenziwe ngentsimbi eshayinayo ngombala
2.3 Ihupula ezinomnqamlezo
2.4 Iihupula ezinamanani axhonyiweyo
2.5 Kukrolwe okanye kwahonjiswa
2.6 Amacici amile okwehupula abizwa ngokuba zii-dilators
3 Ndingafumanisa nini ukuba izinto ezingalunganga azindifanele?
Imbali yemisesane emntwini
Imbali yayo ibuyela kulaa madoda befaka amacici ezindlebeni zabo kumaxesha amandulo, Ookumkani baseSiriya okanye abaPristi baseYiputa.
Basebenzisa igolide ukuzenza kwaye abanye sele bedibanise le nto namatye anqabileyo anjengeesafire, iirubhi okanye neemeraldi.
Abantu abasebenzisa kakhulu iGrisi, i-Egypt, iArabhu kunye neAnglo-Saxon kwaye kuphela ngabantu abanezinga eliphezulu ekuhlaleni abanokuvunyelwa ukuba bazithathe, nangona bekukho amakhoboka anokuyisebenzisa, kodwa enemvelaphi ephezulu.
Nangona uphawu lwayo olukhulu lubangelwa kukusasazeka kwayo yonke iYurophu, ukusukela oko yayingabaphangi bokwenza iphuphu njengengcinga esefashonini. Namhlanje, ukunxiba olu hlobo lweringi yinto efanelekileyo kwaye ihambelana kakhulu namaxesha esiphila kuwo, enkosi kwinto yokuba yeyenkcubeko evulekileyo ngakumbi.
Isinyithi enemibala yesilivere
Le nto ifake imfashini kwaye kuyabonakala kuluncedo kakhulu kuba yi-hypoallergenic. Zeziphi izibonelelo ezinikezelwa ngala macici? Yinto enombala wesilivere kwaye into elungileyo ebonisayo yile ukuba ixesha lihamba alilahli kukhanya okanye umbalaIya kuba njengosuku lokuqala. Olunye uncedo kukuba ayibizi mali ininzi, kodwa umhla ofuna ukubambisa okanye ukuthengisa ngesisindo awunakuba nexabiso.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo ngombala
La macici avela kumnyama ukuya kwigolide.. Ukuba zenziwe ngombandela olungileyo akukho mfuneko yokuba ziphulukane nethoni, kuba ezinye zazo zidibanisa neetyuwa zomzimba womntu. Icandelo elifanelekileyo lensimbi li-316 ukusoloko ugcina loo mbala mhle. Kukho uluhlu olubanzi lwamacici amadoda ngolu hlobo kwaye zonke ziyamangalisa.
Amacici ihupula enomnqamlezo oxhonyiweyo ibe yeklasikhi ukusukela iminyaka emininzi. Njengoko zingaphumi kwifashoni, uyilo lwayo lwenziwe ngezinto ezahlukeneyo ezinjengesilivere, igolide kunye nentsimbi engenasici. ngezimbo kuyo yonke imibala. Umahluko okwahlukileyo kolu luyilo awusayi kuza wedwa kunye nomnqamlezo oqhelekileyo kuba ungadityaniswa nayo nayiphi na ipendenti encinci ukuze bangahlali bodwa.
Iihupula ezinamanani axhonyiweyo
La macici anezisombululo ezingapheliyo zokuba unxibe ukuxhoma isampuli encinci ebonisa ubuntu bakho. Uninzi lwezi luyilo lwenziwe ngentsimbi engenasici engenasiphelo kunye nokugqitywa kwepolish ephezulu ukuze kukhanye.
Kukrolwe okanye kwahonjiswa
Ngamacici ayinxalenye yobo buhle ukuze ihlale ixesha elide. Uninzi lwenziwe ngentsimbi kwaye uyilo lwazo lolokuqala. Sinokugqitywa kokumnyama kunye neespiks ezintandathu ezijikeleze imilo yeringi, emnyama okanye isilivere ene-zircons, leyo iza nohlobo oluthile lomzobo wale mihla kunye nomzobo oqingqiweyo okanye ezo zidibanisa imibala emininzi ukuze zibukeke zihle.
Amacici amile okwehupula abizwa ngokuba zii-dilators
La macici anemfashini kwaye azisa umsebenzi omninzi kunye nawo, kuba kuya kufuneka ufumane loo ndawo kancinci kancinci ukuze ukwazi ukufaka icici. Kuya kufuneka senze umngxunya omncinci kwaye yiya kuvulwa ngeekhonksi ezikhulayo ukwandisa ububanzi. Kuya kuthatha iiveki ezininzi ukufezekisa iziphumo zakho.
Ndingafumanisa nini ukuba izinto ezingalunganga azindifanele?
Ngokuqinisekileyo uqaphele xa ukhulula icici umbala omnyama okanye oluhlaza oshiya ulusu. Lo mbala uya kuxhomekeka kakhulu kwizinto ezenziwe ngayo kunye Kungenxa yokusabela kweenyawo zethuWajongana nayo.
I-pH yolusu lwethu okanye ukubila ngokwakho kungazonakalisa ezi zinto kwaye babangela ukuba izinto zabo ziphulukane nepropathi. Ngale ndlela unokufumanisa ukuba lo mbandela wawungekho mgangathweni.
Ukuba olu hlobo lokuphendula lwenzeka kungenxa yengubo yeasidi yesikhumba Kuyasikhusela kuzo zonke ezi arhente zangaphandle ezinokubangela lo monakalo. Ukuphendula ngale ndlela kuthintela ukukhula kweentsholongwane kwaye kusibuyisele ekubeni nolusu olusempilweni kakhulu.
Qaphela ezinye iikhemikhali ezifana neesepha, iziqholo okanye iziqholo kuba zinceda iziqwenga ezithile zamatye ukuba zonakalise ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Amacici e-Hoop yamadoda